Osimiri Nudist kacha mma na Denmark | Akụkọ Njem
Osimiri gba ọtọ na Denmark
Maria José Roldan | | Denmark
Nudism na-aghọ oge ezumike oge ezumike ma ọ bụ ezumike maka ọtụtụ ndị mmadụ. Ọ bụ eziokwu na enwere otu ndị na-eme nudism na ndụ ha kwa ụbọchị, ha bụ obere okwu. Ihe a na-emebu bụ na ndị mmadụ nwere ụdị ndụ ọdịnala nwere ọrụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ebe uwe na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nọ ma mgbe ezumike ha rutere, ha chọrọ ịkwa iko.
Enwere ike ime Nudism naanị maka ntụrụndụ, iji hụ ihe ọ na-adị ma ọ bụ n'ihi na ịchọrọ iwepụ ihe niile na-ezighi ezi kwa ụbọchị na-agbakọ n'ime afọ ma chọọ inweta nnukwu mmetụta nke nnwere onwe. E nwere ọtụtụ ndị na-eme nudism n'ihi na n'ụzọ dị otú a, ha na-enwe mmetụta ka ukwuu na njikọ ha na ọdịdị ha na okike. Ọ na-eme ka obi dị ha mma ma jikọtara ha na ụwa.
1 Denmark na ụsọ mmiri ya
2 Respectkwanyere ndị ọzọ ùgwù
3 Nudist osimiri na Denmark
4 Echela banyere ya nke ukwuu
Denmark na ụsọ mmiri ya
'Ssọ ụsọ oké osimiri nke Denmark adịghị ihe na-erughị kilomita 7300 n’ogologo Yabụ ị nwere ike iche n'echiche oke osimiri ọ nwere ka onye ọ bụla na onye ọ bụla chọrọ ileta obodo a nwee ike ịnụ ụtọ ụsọ mmiri ya na anyanwụ ya. E nwere ngụkọta ihe karịrị 200 osimiri osimiri Danish nke nwere onyinye maka ịbụ osimiri kachasị mma, ya mere nwee ọkọlọtọ Blue a ma ama. Ọkọlọtọ a na-eme ka obi sie gị ike na osimiri nwere mmiri dị ọcha na nke kristal, na ọ dị ọcha nakwa na ị ga-enwe ike ịnọ otu ụbọchị n’ụsọ osimiri na gị na ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị.
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịga Denmark ezumike ma ị naghị anabata nudism, mgbe ahụ, ọ ka mma ka ị nọrọ n'akụkụ osimiri ya ma ọ bụ chọọ ebe ọzọ ị ga-esi nwee obi ụtọ n'ụsọ osimiri dịka ụkpụrụ gị si dị. Gịnị mere m ji agwa gị ihe a? N'ihi na ndị Denmark na-achọ ịmasị ọtọ ma ha na-eme ya n'ụsọ osimiri.
Maka nke a - na Denmark, e nwere ọtụtụ osimiri nudist, n'ihi na otu a ndị bi na ya nwere ike ime nudism n'emeghị ihere na enweghị ntaramahụhụ. I nwedịrị ike ịchọta osimiri n'ụsọ mmiri ya nke na-abụghị ndị nudist nakwa na ndị mmadụ na-eji uwe mmiri ha ma enwere nhọrọ nke iyi uwe mmiri ha na ime nudism na-enweghị onye na-ele ya anya dị egwu.
A nabatara Nudism na Denmark nke ọma ma hapụ ya n'akụkụ niile. Ga-enwerịrị ike ịgba ọtọ ma ọ bụrụ na enwere ihe ịrịba ama ma ọ bụ ụfọdụ akara aka nke na-adọ gị aka na ntị na amachibidoro ịgba ọtọ na ebe ahụ.
Respectkwanyere ndị ọzọ ùgwù
Ekwesiri icheta na nudism enweghị ihe gbasara mmekọahụ yana na ọ bụghị ihe ruru unyi ka ndị mmadụ na-ahụ ndị ọzọ gba ọtọ. Kpamkpam. Nudism nwere ihe gbasara udo nke obi, echiche nke nnwere onwe na njikọ nke ụwa.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ime nudism n’ụsọ osimiri Danish (ma ọ bụ n’ebe ọ bụla ọzọ kwere ka ịgba ọtọ), mgbe ahụ ị ga-asọpụrụ ndị ọzọ. Ọ dị mkpa na ịkwanyere onye nke ọzọ ùgwù bụ ihe kachasị mkpa yana na n'agbanyeghị agbanyeghị okwu rụrụ arụ, mmekọahụ ma ọ bụ omume enweghị nsọpụrụ gosipụtara n'ebe ndị ọzọ nọ. Maka na anaghị anabata ụdị agwa a ebe ọ bụla.
Nudist osimiri na Denmark
Osimiri ndị gba ọtọ na Denmark dịkarịsịrị ndịda Marielyst Strand, ụfọdụ n'ụsọ mmiri ndị a bụ:
Boto Beach (na Flaster Island)
Osimiri Albuen (na agwaetiti Lolland)
Osimiri Houstrup (n'ebe ugwu nke Hennestrans)
Osimiri Sonderstrand (na Romo Island)
Skagen Beach na Tannisbugten (n'ebe ugwu nke Looken n'etiti Nr. Lynby na Rubjerg Knude ma ọ bụ Hirtshals).
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụsọ oké osimiri dum nke Denmark ka a ga-ahụta dị ka oke osimiri buru ibu ma buru ibu, n'ihi na ebe enwere ndị nwere uwe mmiri, ha nwekwara ike ịhọrọ uwe ma pụọ ​​n'enweghị uwe.. Nwere ike ịhụ nke a, dịka ọmụmaatụ, na ederede nke Aarhus ebe ndị mmadụ na-ekpori ndụ ọtọ ọtọ ma na-agba ọtọ n'ụsọ osimiri n'ihu ọha. N'ezie, ọ bụrụ na iji uwe ịsa ahụ gaa n'ụsọ mmiri ndị a, ha ga-ele gị anya dị ka ihe ijuanya, ebe ọ bụ na ha na-enwekarị nnwere onwe nke ịgba ọtọ na osimiri karịa iyi akwa mmiri iji kpuchie ebe ndị mmadụ na-akpachi anya.
Echela banyere ya nke ukwuu
Ọ bụrụ n’ịmasị ịmị ọtọ ọtọ ma ịchọrọ ezumike pụrụ iche, echekwala banyere ya nke ukwuu ma nwee ọmarịcha osimiri ndị ị ga - ahụ na ị ga-ahụ ihe omimi. N'ịbụ ndị ọha ha nabatara kpamkpam agaghị enwe nsogbu na iwu ma ọ bụ na ha agaghị egosi gị n'akụkụ oke osimiri dịka ọ ga-eme na mba ndị ọzọ ebe a naghị anabata ịgba ọtọ na ọbụnadị iwu na-akpagbu ya.
Ọ bụrụ n’icheghị na a nabatara ya, naanị ị ga - achọ maapụ Denmark nke osimiri ya ma ị ga - enwe ike ihu otu esi egosi oke osimiri na enwere ndị na - agba ọtọ ka ị nwee ike ịhọrọ nke dị kasị nso n’ebe obibi gị.
Akụkụ dị mma nke osimiri ịgba ọtọ na Denmark bụ na ha bụ oke osimiri, yabụ ị nwere ike ịnwe ohere nke gị iji zuru ike n’enweghị ịbịaru onye ọzọ nso onye na emekwa nudism. Ha adịghị ka oke osimiri jupụtara ebe mmadụ niile nọ nso na ibe ha nke na onweghị ụzọ ị ga-esi nwee mmekọrịta chiri anya ma ọ bụ izu ike makana ị hụrụ ihe niile ọnụ ụzọ nke ọzọ na-ekwu.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na n'ihi ihe ọ bụla enweghị ohere zuru oke ma enwere ọtụtụ mmadụ, ndị mmadụ na-echebara echiche ma na-ekwe (ma ọ bụ kwesịrị ikwe) na enwere ohere dị ukwuu n'etiti otu onye na onye ọzọ tupu ha achọta ebe ha nwere ike ịnwụ anwụ.
Mgbe ị gụsịrị ozi a niile, ị nwere data zuru ezu iji nwee ike ịtụle ma ịchọrọ ịga njem na mpaghara ndị Danish na ezumike gị. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị bụ onye na-enwe mmasị n'ịgba ọtọ ma nwee nnwere onwe nke mmụọ ahụ, ị ​​nwere ike ịnọworị na-eche echiche banyere ịlele ụgbọ elu na ebe obibi iji nwee ike ịga ngwa ngwa o kwere mee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Denmark » Osimiri gba ọtọ na Denmark
Oke Osimiri nke Worldwa